QM ee Soomaaliya oo xaqiijisay in qof shaqaale ah oo ka tirsan shirkad ganacsi oo qandaraasle ah laga helay caabuqa cudurka COVID-19 | UNSOM
08:48 - 05 Jun
Qofka shaqaalaha ah ayaa karantiil ku jiray siddeed maalmood ka hor intaan laga helin cudurka, dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa su’aalo weydiinaya qofka si loo raadraaco dadka qofka la xiriiray.
Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxay si dhab ah u qaadanaysaa cudurka safmarka ah ee caalamka ku fiday ee COVID-19 waxayna, toddobaadyadii la soo dhaafay, diyaarisay oo hawlgelisay habraacyada caafimaadka iyo taageerada si loogu diyaargaroobo suurtagalnimada ah inay dhacdo arrintan oo kale. Waxaan mudnaanta siinaynaa daryeelka qandaraaslaha iyo in laga hortago inuu caabuqu sii faafo.
QM, oo u maraysa xafiirka maxalliga ah ee Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) waxay la shaqeynaysay hay’adaha dowladda Soomaaliyeed si loo diyaariyo nidaamyada caafimaadka dalka si loo xakameeyo loona yareeyo in cudurka safmareenka ah uu ku faafo Soomaaliya.
 Bayaan ka soo baxay Nidaamka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ee ku saabsan taageerada uu siinayo xakameynta caabuqa COVID-19
 Qaramda Midoobay oo Soomaaliya Ugu Hambalyeysay Inay Gaartay ‘Marxaladda Go'aamintaecision Point’ ee Deyn Cafinta